Wararka Suuqa Maanta: Barcelona iyo Ac Milan oo ku biiray Tartarnka Jesse Lingard, Xanta Timo Werner ee Newcastle United, iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Barcelona iyo Ac Milan oo ku biiray Tartarnka Jesse...
Wararka Suuqa Maanta: Barcelona iyo Ac Milan oo ku biiray Tartarnka Jesse Lingard, Xanta Timo Werner ee Newcastle United, iyo Qodobo kale
Milkiilayaasha cusub ee Newcastle United ee Sucuudiga ayaa qorsheynaya inay fiiriyaan Guulaha Macalimiinta Jarmalka sida Jurgen Klopp iyo Thomas Tuchel. weeraryahanka Timo Werner, oo 25 sano jir ah , ayaa bartilmaameed sare ah, waxana ku wehliya daafaca dhexe ee Germany Niklas Sule, 26 sano jirka iyo, xidiga faloobka ka noqday Barcelona ee reer Brazil ee Philippe Coutinho, 29,. ( Bild)
Magpies-ka ayaa la xiriirtay wakiillada daafaca dambeedka dhexe ee kooxda Leicester City Wesley Fofana iyagoo kala hadlay suurtagalnimada ay ugu dhaqaaqi karaan 20 jirkaan bisha Janaayo. (RMC Sport)
Barcelona ayaa doonaysa in ay iska iibiso Coutinho marka la gaadho suuqa January Liverpool ayaa u furan in ay 29 jirka ku soo celiso Merseyside. (Express)
Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Juventus Adrien Rabiot ayaa sidoo kale lala xiriiriyay Newcastle , iyadoo kooxda Serie A ka dhisan ay u furan tahay inay iibiso 26 jirkaan bisha Janaayo si ay gacan uga geysato sidii ay u heli lahayd dalabyada u imaanaya xiddiga qadka dhexe ee Monaco Aurelien Tchouameni ama xiddiga qadka dhexe ee Manchester United Donny van de Beek, 24. (Calciomercato)
Tababaraha Paris St-Germain Mauricio Pochettino ayaa sheegay in kooxda Ligue 1 ay sameyn doonto “wax walba oo suuragal ah si ay u ilaashato” weeraryahanka reer France Kylian Mbappe. 22 jirkaan ayaa qandaraaskiisu dhacayaa xagaaga soo aadan waxaana lala xiriirinayaa Real Madrid. (Marca)
AC Milan iyo Barcelona ayaa hoggaamin doona kooxaha isku dayaya inay la soo saxiixdaan xiddiga qadka dhexe ee weerarka uga ciyaara England Jesse Lingard, oo 28 jir ah, haddii uu ka tago Manchester United marka qandaraaskiisu dhammaado xagaaga dambe. (dailymail)
Monaco ayaa dul dhigtay qiimo dhan 60m euros Tchouameni oo 21 jir ah, iyadoo Real Madrid, iyo sidoo kale Manchester City, Chelsea iyo Liverpool ay aad u doonayaan ciyaaryahanka. (Marca)
Tababaraha Leicester City Brendan Rodgers ayaa ah bartilmaameedka ugu sarreeya ee Newcastle haddii milkiilayaasha cusub ee kooxda ay go’aansadaan inay ceyriyaan tababaraha Steve Bruce. (Mirror)
Luis Campos, lataliyihii hore ee isboortiga ee Monaco iyo Lille, ayaa ka mid ah tiro magacyo ah oo ay Newcastle ku fikireyso doorka agaasimaha isboortiga kooxda. (Sky Sports)
Real Madrid ayaa xiiseyneysa saxiixa daafaca Chelsea Antonio Rudiger, oo 28 jir ah. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka ayaa qandaraaskiisu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, waxaana uu khibrad ku dari doonaa afarta dambe ee kooxda reer Spain. (Marca)
Phil Foden ayaa qarka u saaran inuu u saxiixo Manchester City heshiis ku kacaya ku dhawaad ​​50 milyan oo ginni, iyadoo 21 jirka qadka dhexe ee England heshiiskiisa cusub ee lixda sano ah uu qarka u saaran yahay inuu qaato 150 kun ginni isbuucii. (Mirror)
Arsenal ayaa isku diyaarineysa dalab 30 milyan oo euro ah oo ay ku dooneyso 22 jirka garabka uga ciyaara kooxda Club Bruges ee Noa Lang. (Voetbal24)
Manchester United ayaa dib u soo nooleyn karta dadaalkeedii ahaa inay la soo wareegto 22 jirka Sevilla ee daafaca dhexe ee Faransiiska Jules Kounde, kaasoo sidoo kale weli bartilmaameed u ah Chelsea . (FourFourTwo)
Barcelona ayaa wadahadalo horumar leh kula jirta xiddiga khadka dhexe ee Spain Pedri oo ku saabsan heshiis cusub, iyadoo 18 jirkaan uu diyaar u yahay inuu ogolaado qandaraas socon doona ilaa 2026 waxaana ku jira qandaraaskiisa lagu burburin karo in ka badan 600 milyan euro. (Gool)
Daafaca kooxda Borussia Dortmund iyo xulka Jarmalka Mats Hummels, oo 32 jir ah, ayaa uga digay Erling Braut Haaland, oo 21 jir ah, inuusan heli karin boos joogta ah haddii uu tago kooxda. Manchester City , Manchester United , Chelsea iyo Real Madrid ayaa dhamaantood loo malaynayaa inay xiiseynayaan saxiixa weeraryahanka reer Norway. (Bild)
Paris St-Germain ayaa u dhaqaaqi karta weeraryahanka Fiorentina Dusan Vlahovic si uu ugu noqdo bedelka weeraryahanka reer France Kylian Mbappe, oo 22 jir ah, kaasoo qandaraaskiisu dhacayo dhammaadka xilli ciyaareedkan. Si kastaba ha ahaatee, PSG ayaa loolan kala kulmeysa 21-jirka reer Serbia ee Vlahovic, iyadoo Tottenham, Juventus iyo Bayern Munich ay dhammaantood la xiriirinayaan ciyaaryahanka. (Le 10 Sport)
Tababaraha Atletico Madrid Diego Simeone ayaa isku dayay inuu la soo saxiixdo Lionel Messi oo 34 jir ah xagaagii, waxaana uu faah faahiyay sida uu ugu xilsaaray weeraryahankiisa Luis Suarez inuu ka dhawaajiyo saaxiibkiisii ​​hore ee Barcelona ka hor inta uusan xiddiga reer Argentina u dhaqaaqin Paris St-Germain. (DailyMail)
Previous articleWakiilka Ansu Fati oo Sheeko Cusub kasoo saaray Heshiiska Xidigan ee Kooxda Barcelona
Next articleWakiilka Franck Kessie oo u sheegay Man United iyo Barcelona Qaabka lagu heli karo Xidigan
Ole Gunnar Solskjaer ayaa si gaar ah u amaanay labada xiddig ee Manchester United Cristiano Ronaldo iyo Jesse Lingard kaddib guushii ugu dambeysay...
Xog: Aaway shirkii uu Farmaajo iclaamiyey ee lagu soo bandhigi lahaa...
Dhageyso: Mahdi Guuleed oo sharxay fasiraad qaldan oo laga bixiyey xukunkii...